पर्वतको पूजामा ल्याङसोङ तामसाङले भने-‘हामीले राजनीति बिर्सिदिनुपर्छ’ - खबरम्यागजिन
Homeखबरपर्वतको पूजामा ल्याङसोङ तामसाङले भने-‘हामीले राजनीति बिर्सिदिनुपर्छ’
पर्वतको पूजामा ल्याङसोङ तामसाङले भने-‘हामीले राजनीति बिर्सिदिनुपर्छ’
August 8, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
कालेबुङ, 8 अगस्त
लेप्चाहरूको पारम्परिक पर्व तन्दोङ ल्हो रम्फात आज कालेबुङको मिरिक क्योङमा भव्यतासँगले पालन गऱ्यो। इण्डिजिनिय लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशन अधिनस्थ रहेको मिरिक क्योङको आयोजनामा भएको उक्त उत्सव अवधि विभिन्न क्षेत्रका लेप्चाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
टिस्टा र रङ्गीतको पौरणिक कथासँग जोड़िएको उक्त किम्वदन्ती अनुरूप प्रलय आउँदा लेप्चाहरू सोही पर्वतमा चढेर बाँचेका थिए। जसको फलस्वरूप अगस्त महीनामा पर्ने यस उत्सवलाई लेप्चाहरूले विशेष उत्सवको रूपमा पालन गर्ने गरेको छ।
सोही अनुरूप आज आयोजित कार्यक्रमबीच तेन्दोङ पर्वतको पूजा गर्दै लेप्चाहरूको भाषा र संस्कृतिबारे व्यापक चर्चा गरियो। कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै इण्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशनका अध्यक्ष दोर्जी टी. लेप्चाले अब लेप्चा इतिहासलाई घर घरमा बचाएर राख्नुपर्ने आह्वान गरे।
उनले लेप्चाहरूको प्रत्येक उत्सवलाई घरघरमा पालन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सबैलाई यसको निम्ति एकमुष्ठ बन्ने आह्वान गरे। कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै इल्टा अध्यक्ष दोर्जी टी. लेप्चाले भने, ‘हामी सांस्कृतिक हिसाबमा बहुमतमा रहनुपर्छ। यदि लेप्चाहरू कल्चरली अल्पसंख्यक भए, भोलि जातिलाई सङ्ग्राहलयमा हेर्नुपर्ने समय आउनुसक्छ। यसैले अब लेप्चा इतिहालाई घर घरमा संरक्षण गरिनुपर्छ। भाषा र संस्कृतिलाई प्रत्येक परिवारले संरक्षण गर्नुपर्छ। हरेकले आफ्नो जरा बुझेको हुनुपर्छ। यसको निम्ति सबै अघि आउन जरूरी छ।’
उनले राजनैतिक रूपमा हिलोछेपाइ अब बन्द हुनुपर्ने जनाउँदै सबैलाई एक भएर विकासको पथमा अघि बढ्ने आह्वान पनि गरे। यता एमएलडीबी अध्यक्ष ल्याङसोङ तामसाङले लेप्चाहरूले बोर्ड गठनपछि साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गरिरहेको दावी गरे। उनले लेप्चा साहित्यको विकास र सम्वर्द्धनमा सबैलाई अघि आउने आह्वान गर्दै भने, ‘कालेबुङमा धेरै लेखकहरू जन्मिरहेका छन्। यो हर्षको कुरा हो। भोलिको दिनमा हामी नरहे पनि हाम्रो भाषा र संस्कृति रहन्छ। लेखनेहरूले कलम चलाउन छोड़्नु हुँदैन। राम्रो कृतिलाई बोर्डले प्रकाशित गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि गर्नेछ।’
उनले लेप्चाहरूलाई भावी पीड़िको निम्ति अघि आउनुपर्ने जनाउँदै यो समय लेप्चाहरूले सुतेर बस्ने समय होइन पनि भने। तामसाङले भने, ‘हामीले राजनीति बिर्सिदिनुपर्छ। धर्म बिर्सिनुपर्छ। किनकि हाम्रो निम्ति सब भन्दा ठूलो कुरा जातिको भविष्य हो। यसको निम्ति प्रत्येक लेप्चा अघि आउन जरूरी छ।’
रेन एसटी लेप्चाले पूजा गरेपछि शुरू भएको उक्त कार्यक्रममा टी रोङकपले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए। कार्यक्रमबीच ओटी सादाको लेप्चा पुस्तकको पनि लोकार्पण गरिएको थियो भने रिक क्योङ सेजुम, सोङथुप क्योङ,पैयुङ लेप्चा रात्री पाठशाला, सामचेव क्योङ, बिकद्याङ क्योङ आदिका कलाकारहरूले पनि प्रस्तुति दिएका थिए। लेप्चाहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा आनन्द आगो लेप्चाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।
‘मनको साथी’ खोज्दै अनुपमा (भिडियोसहित)
विनय तामाङलाई निरज जिम्बाको जवाब : ‘जसको5पैसाको मान छैन, उसको5करोड बराबरको मानहानी कसरी हुनसक्छ?, म5पैसा पनि दिने छुइनँ’